အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက နျူကလီးယားဆွေးနွေးပွဲအတွက် အမေရိကန်၏ အဆင့်သင့်ဖြစ်မှုကို မေးခွန်းထုတ် - Xinhua News Agency
တီဟီရန်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hossein Amir Abdollahian က နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်တွင် အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် JCPOA သို့ပြန်သွားရန် အမေရိကန်၏ အဆင်သင့်ဖြစ်မှုကို မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပြီး နျူကလီးယား ဆွေးနွေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အမေရိကန်၏ ခုတစ်မျိုးတော်ကြာတစ်မျိုး လုပ်ဆောင်ချက်အား ဝေဖန်ခဲ့သည်။“အိမ်ဖြူတော်က အီရန်နဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ တိုက်တွန်းထားပြီး JCPOA ကို ပြန်သွားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ပြိုင်တည်းမှာအီရန်က လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေ ချမှတ်တယ်” ဟု Amir Abdollahian က ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် တွစ်တာအကောင့်တွင် မွန်းလွဲပိုင်းက ရေးသားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဟာ မစ္စတာဘိုင်ဒန်ရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို အနီးကပ် လေ့လာနေပါတယ်’’ ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
အီရန်နိုင်ငံ၏ အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်က မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အစီအစဉ်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် လူလေးဦးနှင့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနက အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။
လာမည့် ဗီယင်နာ ဆွေးနွေးပွဲသည် အပြန်အလှန် အကျိုးစီးပွားကို လေးစားမှုအပေါ် အခြေခံသင့်ကြောင်း Amir Abdollahian က အလေးပေး ပြောကြားခဲ့ပြီး “စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က စကားပြောဆိုဖို့ ကို ပြောတာမဟုတ်ဘဲ မြင်သာထင်သာရှိတဲ့ ရလဒ်တွေ ရရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု ၎င်းကအလေးပေး ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
TEHRAN, Nov.2(Xinhua) — Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian on Tuesday questioned Washington’s readiness to return to the Iran nuclear deal, or the JCPOA, and criticized its two-faced actions concerning the nuclear talks.
“We are closely examining Mr. Biden’s behavior,” he added. On Oct. 29, the U.S. Department of Treasury issued sanctions against four individuals and two companies related to the unmanned aerial vehicles program of Iran’s Islamic Revolution Guards Corps.
The upcoming Vienna talks should be “on the basis of respect for mutual interests,” Amir Abdollahian stressed, noting that “the purpose of negotiations is not talking for the sake of talking, but to achieve tangible results.” Enditem